ခန္တီးမြို့အနီး ချင်းတွင်းမြစ်ထဲ မျောလာတဲ့ အမျိုးအမည် မသိ အရာဝတ္ထုကြီးက တရုတ်ဒုံးပျံဖြစ်လေမလား? - Zet Star
ခန္တီးမြို့အနီး ချင်းတွင်းမြစ်ထဲ မျောလာတဲ့ အမျိုးအမည် မသိ အရာဝတ္ထုကြီးက တရုတ်ဒုံးပျံဖြစ်လေမလား?
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ခန္တီးမြို့ နန်းဖာကျေးရွာတွင် ချင်းတွင်းမြစ် အထက်ပိုင်းမှ မျောလာသည့် ဂြိုဟ်တုအစိတ်အပိုင်းဟု ယူဆရသည့် ပစ္စည်များကို ဆယ်ယူရရှိထားသည်ဟု နန်ဖာကျေးရွာအုပ်စု ဥက္ကဋ္ဌ ဦးသိန်းနိုင်က ပြောကြားပါတယ်။
“စက်တင်ဘာလ ၂၈ ရက် ညနေ ၅ နာရီ ကျော်ကျော်လောက်မှာ ချင်းတွင်းမြစ်အတိုင်း အထက်က မျောလာတာ။ ကျွန်တော့် ရွာသားတစ်ယောက်က စက်လှေနဲ့ မြစ်တစ်ဖက်ကမ်းကို ကူးရင်းနဲ့မြင်တာ။ ဆွဲရင်း ဆွဲရင်းနဲ့ လပိုင်အိုက်ဝဲအတွင်း ရောက်သွားပြီးမှ လပိုင်အိုက်ဝဲ ကမ်းခြေတစ်ဖက်မှာ ကြိုးနဲ့ချည်ပြီး ကပ်ထားခဲ့တာ။ အဲဒီလိုချည်ထားပြီး ၂၉ ရက်မှာ အကူလူတစ်ယောက်ကို ခေါ်ပြီးတော့ ဟွန်ဒါ စက်လှေပေါ် တင်ပြီးတော့ ကျွန်တော် ဆီလာပြတာပါ။ အဲဒီလိုလာပြတော့ ဒါတော့ ဂြိုဟ်တု အစိတ်အပိုင်းလိုလို တပ်ကသုံးတဲ့ ထောက်လှမ်းရေး လေယာဉ်လိုလို ထင်လိုက်တာပေါ့။ အဲဒီမှာ ကြယ်တစ်ပွင့်ပါတယ်။ အစိတ်အပိုင်းရဲ့ အကာမှာ TZ11 ဆိုပြီးပါတယ်။ ဒါနဲ့ ဒါကို အိမ်ရှေ့မှာ ထားထားလိုက် ဌာနဆိုင်ရာကို အကြောင်းကြားလိုက်မယ်။ ထူးခြားမှု တစ်ခုတော့ ရှိနိုင်တယ်ဆိုပြီး အစည်းအဝေးသွားတဲ့ အချိန်မှာ ပြလိုက်တယ်။ ရုံးက စာရေးကြီးကို ပြလိုက်တယ်” ဟု နန်ဖာကျေးရွာဥက္ကဋ္ဌ ဦးသိန်းနိုင်က ပြောကြားပါတယ်။
အဆိုပါ အစိတ်အပိုင်းကို လပိုင်အိုက်ဝဲ အတွင်းမှ ဆယ်ယူထားပြီး ယခုအခါ နန်ဖာကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး နေအိမ်တွင် သိမ်းဆည်းထားသည်ဟု သိရပါတယ်။
“အရင်တုန်းက မမြင်ဖူးဘူး။ ကျွန်တော် ရွာသားလာပြတော့ ဒီအစိတ်အပိုင်းက ဒီလိုဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုပြီး တွေးဆကြည့်လိုက်တာပါ။ သူ့အမြင့်အရှည်က ၁၀ ပေ ၂ လက်မ ရှိတယ်။ လခြမ်းပုံစံ (စည်ပိုင်းတစ်ဖက်ပြတ်လို) ရှိတယ်။ လခြမ်းတစ်ဝက်က ၈ ပေ ၂ လက်မရှိတယ်။ တစ်ခြမ်းက ပဲ့ထားသေးတာ။ အနားကွပ်တွေပါ ပြန်တိုင်းတော့ ၆ပေ ၂ လက် မ။ ၂ ပေလောက်က ပဲ့နေပါတယ်။ အခုတော့ အဲဒီပစ္စည်းကို ကျွန်တော့်အိမ်ရှေ့မှာ ထိန်းသိမ်းထားပါတယ်။ တခြားထူးခြားမှု မရှိရင်တော့ သယ်ယူလာခဲ့သူက သတ္တုစ ရောင်းစားမယ်ဆိုရင် သယ်လာသူကို ပေးလိုက်တော့မယ်လေ။ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကို အကြောင်းကြားဖို့ ကျွန်တော်တို့ ရွာစာရေးကို အကြောင်းကြားထားပါတယ်။ အဲဒီပစ္စည်းက အောက်ခြေပိုင်းမှာ လျှပ်စစ်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ပစ္စည်းတွေ တပ်ထားတာ။ ဟန်းဆက်တွေ အားသွင်းတဲ့ အားသွင်းကြိုး ဂျက်ထိုးအပေါက်လိုမျိုး ပါတယ်။ ၄၊ ၅ ရက်လောက်နေလို့ မထူးဘူး ဆိုရင်တော့ ဆယ်ယူလာခဲ့သူက လိုချင်တယ်ဆိုရင် ပြန်ပေးလိုက်တော့မှာပါ။ အခု ကျွန်တော်တို့ ရွာရေဆိပ်က လိုင်းမမိလို့ လိုင်းမိတဲ့နေရာ လာဆက်ပေးတာပါ” ဟု ဦးသိန်းနိုင်က ဆက်လက်ပြောကြားပါတယ်။
အဆိုပါ နန်ဖာကျေးရွာသည် ခန္တီးမြို့အထက်တွင် ရေမိုင် ၁၄ မိုင်ဝန်းကျင်ခန့်သာ ကွာဝေးသည်ဟု သိရပါတယ်။
← မလိုတဲ့ ထောက်ခံစာတွေကြောင့် ဖြစ်နေတဲ့ ပြဿနာတွေနဲ့ အလွဲကြီးလွဲနေတဲ့ ကိုဗစ်ကင်းကြောင်း ထောက်ခံစာ
ကိုဗစ်ရန်သူကို အပြုတ်တိုက်နိုင်မယ့် နည်းလမ်းများ (တဦးချင်း တယောက်ချင်းစီက အလွန်အရေးကြီးပါတယ်) →